Madaxweyne Siillaanyo Oo Sheegay In Heerkii Xanuunka HIV/AIDs Ka Marayay Somaliland Uu Hoos U Dhacay | Saxafi
Madaxweyne Siillaanyo Oo Sheegay In Heerkii Xanuunka HIV/AIDs Ka Marayay Somaliland Uu Hoos U Dhacay
Hargeysa, Somaliland, December 1, 2015 (Saxafi) – Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siillaanyo), oo maanta ka qayb-galay munaasibad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee La-dagaalanka Xanuunka HIV/AIDs oo Komishanka La-Dagaalanka iyo Wacyi-gelinta HIV/AIDs ee Somaliland uu soo qaban-qaabiyay, kana dhacday Hotel Maansoor ee magaalada Hargeysa, ayaa ka dhawaajiyay in heerkii dadka xanuunkaas qaba ee Somaliland uu kala badh hoos uga dhacay heerkii uu cudurkaasi ka marayay Somaliland laba sannadood ka hor.
Munaasibaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, isla markaana markaana shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay Madaxweynaha Somaliland, taas oo ay Komishanka heer Qaran ee La-dagaalanka cudurkani ay sheegeen inuu ku mutaystay doorka hoggaamineed ee uu ka qaatay la-dagaalankiisa iyo ka wacyi-gelinta bulshada, ayuu Madaxweynuhu ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga waramay xuska maalintan caalamiga ah, heerka uu cudurkaasi ka marayo Somaliland iyo dedaalka ay xukuumaddiisu ku sii wadayso la-dagaalanka iyo wacyi-gelinta xanuunkaas ee Somaliland.
Khudbadda Madaxweyne Siillaanyo halkaas ka jeediyay ayaa iyadoo dhammaystiran waxay u dhignayd sidan;
Sannad kasta Kowda Bisha December, waxa Dunida oo dhan laga xusaa Maalinta La Dagaallanka Xanuunka HIV/AIDS-ka. Sidoo kale, Bulshada Caalamku waxay xog-waraysi iyo wada-tashiba ka yeelataa waxa ka qabsoomay dedaalka loogu jiro la dagaallanka iyo cidhib-tirka xanuunka HIV/AIDS-ka iyo waxa hadhay ee u baahan in si wadajir ah wax looga qabto. Dalkeena Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu Bulshada Caalamka kala midaysan yahay la dagaallanka iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS-ka.
Taariikhdu markay ahayd 25/8/2013-kii, waxaan Xafiiska Komishanka Qaranka ee La Dagaalanka Xanuunka HIV/AIDS-ka kaga dhawaaqay siday Madaxweyne ahaan, iiga go’an-tahay la dagaallanka iyo xakamaynta HIV/AIDS-ka. Xukuumaddaydu waxay wakhtigaa yool ka dhigatay in lagu dedaalo sidii xanuunkan loo xakamayn lahaa, si aanu u dhaafin marxaladda uu xilligaa taagnaa, una gaadhin Heerka Labaad ee loo yaqaanno Marxaladda Baahsan.
Maanta oo ah 01-da December, 2015, waxaan jecelahay inaan idinku wargaliyo in ku talo-galkaasi uu fulay, oo xanuunku Waddankeena hoos ugu soo dhacay Marxaladda Koowaad, halkii uu markii hore madaxa la sii galayay Marxaladda Labaad (Marxaladda Baahsan). Labo sanno ka hor heerka uu xanuunkani Dalkeena ka marayey wuxuu ahaa %1.1, halka uu maanta hoos ugu soo dhacay %0.6, taasoo ah horumar aad u weyn oo Qarankani gaadhay, una dhiganta in Xanuunkani uu %54.6 hoos uga dhacay heerkii uu maalintaas taagnaa.
Waxaan idinla socodsiinaya in guud ahaanba Gobollada iyo Degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland uu ka muuqdo hoos u dhacaasi. Mahadda Kowaad Ilaahay baa leh, mar labaad, waxaan halkan mahad-naq iyo ammaanba uga soo jeedinayaa guud ahaanba cid kasta oo isku hawshay wax ka qabashada iyo xakamaynta xanuunkan ama wax-tar, iyo teegeero u fidisay dadkeenna la nool xanuunkan. Gaar ahaan waxaan aad ugu mahad-naqayaa Maayarka Degmada Berbera siduu wax ula qabtay Komishanka Qaranka ee La Dagaallaanka HIV/AIDS-ka iyo taageerada uu siiyey dadka xanuunkaa la nool. Waxaan ku boorrinayaa masuuliiyinta kala duwan ee Qaranka inay si hagar la’aan ah uga qayb qaataan dedaalka loogu jiro la dagaallanka iyo xakamaynta xanuunkan, daryeelna ay u fidiyaan dadka xanuunkan la nool.
Fadliga iyo gar-gaarka Rabbi ka sokow, hoos u dhaca cudurka HIV/AIDs-ka ee dalkeenna ka muuqda, wuxuu ku yimid dedaalka Xukuumaddan aan Madaxweynaha ka ahay oo Komishanka Qaranka ee la Dagaalanka HIV/AIDs-ku wakiil uga yahay. Iyadoo hoos u dhacaasi jiro, haddana waa inaan loo qaadan in khatartii xanuunku meesha ka baxday.
Waqtigan xaadirka ah, hiigsiga Bulshada Caalamku waxa weeye in dedaal badan loo galo sidii cudurka HIV/AIDs-ka loo cidhib tiri lahaa sannadka 2030-ka, haddii ALLAH idmo. Haddaba, si loo gaadho yoolkaa Caalamiga ah ee lagu cidhib-tirayo xanuunkan, waxa lagama maarmaan ah:
In %90 dadka xanuunka la nool ee aan iyagu is ogayni ay is ogaadaan.
In %90 dadka xanuunka la nool ee is ogi ay daawada qaataan.
In %90 hoos loo dhigo dadka cusub ee xanuunka qaada sannad kasta.
Anigoo isku xidhaya gar-gaarka ALLAH, isla markaana kaashanaya kuna kalsoon aqoonta, khibradda iyo waayo-aragnimada durugsan ee ku duugan bulshada Jamhuuriyadda Somaliland, gudo iyo dibedba, waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan dedaal u sii geli doono cidhib-tirka xanuunkan iyo xakamaynta waxyaalaha uu ka dhashaba.
Ugu dambayntii, waxaan halkan codsi uga dirayaa dhammaanba hay’adaha ku shaqada leh la dagaallanka cudurkan HIV/AIDs-ka inay intii awoodooda ah ee wax la qabasho ah, ay Komishanka Qaranka la Dagaallanka HIV/AIDs-ka ka caawiyaan sidii xanuunka looga cidhib tiri lahaa dalkan Jamhuuriyadda Somaliland.
Jamhuuriyadda Somaliland Ha Noolaato,
Af-hayeenka Madaxweynaha Jam. Somaliland,
Xussen Adan Cige (Xuseen Deyr).”
Komishanka Qaranka ee La-dagaalanka HIV/AIDs
La-dagaalanka Xanuunka HIV/AIDs
Xuska Maalinta HIV/AIDs ee December 1
Previous articleXidigaha Geeska – Qalliin Lagu Sameeyay Abwaan Laab-Saalax Iyo Cukuse Oo Booqday
Next articleCountry Records 54.6% Drop In HIV/AIDs Infection Rate In Somaliland